Mahdi Guuleed oo ka hadlay kulan ay la yeesheen beesha caalamka | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Mahdi Guuleed oo ka hadlay kulan ay la yeesheen beesha caalamka
Mahdi Guuleed oo ka hadlay kulan ay la yeesheen beesha caalamka
Ku simaha ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mahadi Maxamed Guuleed ayaa shir gudoomiyay kulan ay la qaateen wakiilada beesha caalamka oo maanta ka dhacay Muqdisho.
Kulankan oo ay ka soo qeyb galeen wasiiro ka tirsan dowlada dhex ayaa loo ga hadlay arimah aminga, dhaqaalaha, arimaha bulshada iyo siyaasada.
Shirkan ay dowladda Soomaaliya la yeelatay wakiillada dowladaha saaxiibka la ah Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xili beesha caalamka ay xalay war kasoo saartay heshiiska dhawaan laga gaaray doorashooyinka Soomaaliya.
Beesha caalamka ayaa qoraalkii xalay ku muujisay inay ka xumeed shaacinta heshiiskaas, waxayna tilmaameen in yoolka dowladnimada Soomaaliya uu ahaa in markaan la gaaro cod bixin toos ah. Iyagoo dhinacyada gaaray heshiiska ugu baaqay in doorashadu noqoto mid daah furan oo u dhacda si xor iyo xalaal ah.
“Saaxiibadu waxay iyagoo ka xun arkayaan in hanaanka la shaaciyay uu ka hooseeyo yoolkii Soomaaliyeed ee muddada dheer lagu taamayay ee ahaa cod bixin toos ah oo lagu soo doorto xubnaha baarlamaanka ee wareeggan doorasho. Saaxiibadu waxay ku baaqayaan in geedi-socodka doorasho ee 2020/21 uu noqoto mid xor ah, xalaal ah, daah-furan oo loo dhan yahay” ayaa lagu yiri bayaanka beesha caalamka.